Puntland Archives - Page 16 of 21 - Sawirrotv
Ciidamada Puntland oo Buuraha Galgala ka Raadinaya Taliyihii Ururka Daacish (SAWIRRO)
May 01, 2016 – Waxaa Heegan adag la galiyay Ciidamada Difaaca Puntland kadib markii la maqlay in ciidan ka tirsan dagaalyanada Daacish ay isku uruursanayaan buuraleyda Galgala. Ciidamada puntland ayaa ka jawaabay Is urursigan, waxa ayna qaadeen howlgalo ay ku tageen goobihii lagu sheegay, iyadoo kooxahaas ay ka carareen aagagii lagu tuhmayey. Maamulka Puntland ayaa sheegtay …
Puntland oo Maal galin Mashaariiceed ka Heshay Dalka Sacuudiga (SAWIRRO)
April 29, 2016 – Madaxweynaha maamulka Puntland mudane, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalmihii u danbeeyay safar shaqo ku joogey dalka Sucuudiga Carabiya ayaa heshiis dhanka maalgashiga iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Puntland la saxiixdey Maal-qabeenka weyn ee kasoo jeeda qoyska Boqortooyada Sucuudi Carabiya Amiir Suldaan bin Naasir bin Cabdicasiis Aala Sucuud. Heshiiskaasi ay kala Saxiixdeen Madaxweynaha …
Madaxweynaha Puntland oo Maalgashato Kula Kulamay Dalka Sacuudiga (SAWIRRO)
April 28, 2016 – Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas oo baryahanba booqasho ku jooga dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay Maal qabeeno waa weyn ee kasoo jeeda dalkaasi oo ay ku jiraan xubno kasoo jeeda Boqortooyada dalkaasi. Madaxweyne Gaas maal qabeenada uu la kulmay ayaa waxaa kamid ahaa hantiilayaal caan …
DAAWO: Maleeshiyo la Wareegtay Gacan ku Haynta Magaalada Buuhoodle (VIDEO)
April 27, 2016 – Wararka laga helayo magaalada Buuhoodle ayaa sheegaya in maleeshiyo hubaysan ayaa la wareegay Magaalada Buuhoodle ee Gobalka Tugdheer Ciidamadan ayaa la sheegay in horay u tabacsanayeen Maamulka Khaatuma hase yeeshee ay hada ka gosteen oo ay sitoosa uga amar qataan Maamulka Gobaleedka Puntland. Maxamed Cagadheere oo ka mida Saraakisha Ciidankaas oo iyagu …
Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiweli Gaas oo ku kulmay magaalada Riyaadh ee dalka Sacuudiga (SAWIRRO)
April 25, 2016 – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane, Shariif Sheekh Axmed oo ku sugan magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga ayaa halkaasi waxa uu kula kulmay Madaxweynaha maamulka Puntland mudane, Cabdiweli Maxamad Cali Gaas. Labada madaxweyne oo siyaabooyin kala duwan u soo gaaray magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayaa wada qaatay kulan caadi ah oo ay …
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo Xariga ka jaray Dhismaha Cusub ee Wasaaradda A. gudaha (SAWIRRO)
April 20, 2016 – Madaxweyne ku-xigeenka Puntland anha kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa maanta waxa uu xarigga ka jaray dhisme cusub oo ay degi doonto Wasaaradda Arrimaha gudaha, dawladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland, dhismahaas oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada Garoowe ee Caasimadda maamulka Puntland. Waxaa Sidoo kale munaasabaddii daah …
Puntland oo Sheegay in Dadka Soo Galaya Maamulkooda Laga Rabo Sharci & Damiin (Dhagayso)
April 13, 2016 – Wasiirka Amniga Maamulka Puntland Cabdi Cali Xersi (Qarjab) ayaa sheegay in laga doonaayo dadka ku nool deeganadda maamulka Puntland inay qaataan sharciyada, dadka kalena marka ay soo galayaan deeganada Puntland laga doonaayo sharci iyo qof wakiil ka ah (Damaanad). Cabdi Cali Xersi ayaa sheegay dadka sharciga laga doonaayo inaan look kala saareyn …
Madaxweyne Gaas oo Maanta Soo Gaaray Magaalada Muqdisho (VIDEO)
April 09, 2016 – Madaxweynaha Maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafti ballaaranan oo uu hoggaaminayey ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Wafdiga Madaxweyne Gaas ayaa waxaa ka mid ahaa Wasiirro, Xidhibaano iyo saraakiil sare oo ka tirsan Madaxtooyada maamulka Puntland, waxaana garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde international kusoo dhoweeyey Ra’iisul-wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, Wasiirro …
Magaalada Boosaaso oo Loogu Deeqay Gawaari iyo Agab Kale (VIDEO)
April 08, 2016 – Guddoomiyaha Laga soo doortay degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis, Cabdi Warsame ayaa shalay hor-geeyay Golaha Deegaanka Minneapolis, qorshe ahaa in gaadiid iyo qalab amaan oo loogu deeqayo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland. Cabdi Warsame oo la hadlayay xildhabaanada guddiga is-kaashiga dowladaha (IGR Committee), ayaa Sharaxay fariinta ay deeqdaani dirayso xilli …